हरेक दिन २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छापिदै !तर मालिकाले छाप्न लागेको लाइसेन्सको गुणस्तर यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि छापेको जस्तो गुणस्तर भनेहुने छैन ! - Nepali News Portal
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १४:४०
२२ कार्तिक २०७५, बिहीबार १४:४० November 8, 2018 Ajako SamacharसूचनाNo Comment on हरेक दिन २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छापिदै !तर मालिकाले छाप्न लागेको लाइसेन्सको गुणस्तर यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि छापेको जस्तो गुणस्तर भनेहुने छैन !
विभागले लाइसेन्स छाप्दा लेजर इन्ग्रेभिङ (डढाएर अक्षर उठाउने) प्रविधि प्रयोग गरेको थियो भने मालिकाले थर्मल प्रिन्ट प्रविधिमार्फत छाप्ने भएको छ।
यो प्रविधिबाट छापिएको लाइसेन्स अहिले बैंकहरूले बनाउने एटिएम कार्ड जस्तै हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य कुमार ढकालले जानकारी दिए।
‘आउट सोर्सिङमार्फत लेजर इन्ग्रेभिङ प्रविधिमा कार्ड प्रिन्ट गर्दा धेरै महंगो पर्नेभयो। एउटै कार्ड छाप्दा झण्डै १ सय रूपैयाँ पर्ने भएकोले थर्मल प्रिन्ट गर्न लागेका हौ’, उनले सेतोपाटीसँग भने ‘आउट सोर्सबाट छापेर ब्याकलक हटुउन्जेलसम्म हाम्रो मास प्रिन्टर पनि आइपुग्छ त्यसपछि पुनः लेजर इन्ग्रेभिङ प्रविधिबाटै लाइसेन्स छाप्छौ।’
मालिकाले छाप्ने लाइसेन्स सुरूको ३० हजारसम्म प्रतिकार्ड १३ रूपैयाँ र बाँकिमा प्रतिकार्ड १५ रुपैयाँमा छाप्ने सहमति गरेको छ।
प्रिन्टीङ प्रविधि फरक भए पनि कार्ड भने मद्रास प्रिन्ट्सले उपलब्ध गराएको पुरानै प्रयोग हुनेछ।
कार्ड जोगाउन प्लास्टिक कभर
मालिकाले थर्मल प्रिन्टबाट लाइसेन्स छाप्ने तयारीमा रहेका कर्मचारीहरू। तस्बिरः सुधिर
यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीलाई प्लास्टिकको कभर हालेर लाइसेन्स दिने भएको छ। कार्डको अक्षर नमेटियोस् भनेर कभर राखेर लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए।
‘पहिलेको लेजर इन्ग्रेभिङ प्रविधिमा डढाएर अक्षर उठाउने भएकोले कुनै पनि हालतमा नउप्कने, नमेटिने हुन्थ्यो। तर, थर्मल प्रिन्ट प्रयोग गरेर लाइसेन्स प्रिन्ट गरेपछि गोजिमा राख्दा र झिक्दा कोरिएला, अक्षर मेटिएला कि भनेर प्लास्टिक कभरमा राखी दिन लागेका हौ’, ढकालले भने।